Odisha Kurwendo uye Kufamba | Imotokari yepamusoro uye Coach Tariff Rental
Tenga mapurisa edu epamusoro uye makarosi
Tinopa motokari dzemotokari uye vashandi vemakambani kuti zviwedzere ruzivo rwako uye kukubvumira kuwana zvakanakisisa kubva pane zviitiko zvako. Chokutanga chedu chekutanga ndechekugutsikana kwako.
Tora mukana wekuona zvimwe zvezviratidzo zveBhubaneswar uye zvakakomberedza apo iwe unoshanyira Odisha.
1 Dzire kana Similar 850 1500 140 14
2 Scorpio kana Saizvozvo 1000 1800 160 16
3 BRV kana zvakafanana 1200 2200 200 20
8 Audi-A3 kana BMW-X1 5000 10000 900 90
Mutyairi wezuva BATA: 200 yeSl #1 ku6, uye 300 ye7 ku9
Night Allowance (22: 00 ku06: 00 Hrs): Rs. 200 yeSl # 1 ku6, uye Rs. 300 ye7 ku9
Nigh Halt Outstation: Rs. 300 yeSl # 1 ku6 uye Rs. 400 ye7 ku9
Kilometer & maawa achatanga uye apedzisa munzvimbo yedu yekuvakira (Garage Kuti Garage)
Mushure mokunge 4 Hrs / 40 Kms slab, mutemo wemaminitsi 30 unobvumirwa. Kune chero upi zvake huri mberi kweiyo inonzi slab, 8 Hrs / 80 Kms slab inoshandiswa. Pakupera kwe8 Hrs / 80 Kms slab, imwe yeKM / Hour ichapiwa mhosva maererano nekutengesa Mutero.
Mutero Wemitero, Mutero Wemitero Nekupakata ichabhadharwa zvakakwana maererano neicho chaiyo + GST: 5%.
Nokuda kwekubuda kunze, kureba kwemadiki kunotaridzwa 250KM nezuva rekarenda kana mararamiro chaiwo, chero ipi zvayo yakakwirira. Mhosva inofanira kunge iri paKM nheyo maererano netareji.
Kuramba A / C inokweretwa paPro-rata based.
Nhamba iri pamusoro apa ichadzokororwa kana kune kuwedzera kukuru kwekutengesa kwemafuta uye kusarudzwa kwemitero.
Kushongedza A / C Coaches
kuti uwane mamwe mashoko uye ruzivo
CHIKAMU CHAKADZIDZWA MAZVO:
Automated SMS inonyevera nezvekusimbiswa kwekutsvaga.
Kushandura SMS / Mail maziso pamusoro pekugovera Motokari & Chauffeur mushure memaawa 02 e Pick-up.
Daily News Paper, Bhodhoro reMaminari Mvura, Mambure, Kititi Rinobatsira Pakutanga, Bhokisi-Girasi uye Dry Tissue Paper rakapiwa mumotokari dzose pamwero mukuru.
Zvose motokari dzakagadzirwa nemhepo, kwete kusvuta, dzakanaka uye dzakachena.
Kuti uwane zororo, Zvokudya, Zvibereko & Juice zvichagadzirirwa vamiririri pakukumbira pamwe nemari yekuwedzera.
Chauffeurs uye / kana Mumiriri weSouth Pebble's Representative akaiswa neWatch Placard paIndaneti / Railway Station kuti vagamuchire vaenzi uye Pick-up.
Mafambiro eSebvu Mafashoni akagoverwa mutyairi ane ruzivo, kuzviisa pasi, unyanzvi uye anoziva nemigwagwa uye mune yunifomu yekambani.
Kubudirira Co-Ordinator inotsanangurwa pane nzvimbo yekubata zvinodiwa nevatengi pane zviitiko uye misangano.
Pasi payo Clock cab-service inowanikwa kuChishanu neKutungamira Kwenyika, maziso okuona maziso, rwendo rwakatungamirirwa uye zviitiko zvakakosha.
Special cab-rental services zviripo zveMuchato.
Mashoko evanoshamwaridzana neavo vanochengetwa muData-base kwekupa huri nani huri huri huri huri huri huri huri huri huri hwehutano.
Car Bookingsings inofanira kuitwa musati ma 24-maawa. Zvisinei, Sand Pebbles Operations Desk inogona kuonekwa kana motokari inoda mukati meawa 24.
Paunenge uchiita zvekuchengetedzwa kwepa-line, ruzivo rune fomu rwakatemwa runofanira kupiwa.
Kushandurwa kwe-On-line kunowanzosatevera nguva yekubhadhara. Kunyange zvakadaro inoshanda Govt. Mitero, Mari yebhadharo, Mitero yekufambisa uye Mutemo weZvibvumirano zveNyika-Gwaro Mitoro inofanirwa kubhadharwa nemushandi panguva yekugoverwa nekate.
Zvose zvakachengetedzwa uye kutengesa kunoitwa kuburikidza newebhishopu reSandle Pebbles zvinowanikwa mukugadziriswa neSande Pebbles. Dombo reMatombo rine mvumo yekuzvidemba kubhuku rakagadziriswa maererano nemitemo kunze kwekugadzirisa kwavo.
Transaction Fee ye15% yemari yakatarwa yekubhadhara ichabhadharwa kana kubvisa kwacho kuchibviswa maawa 06 asati apfuura. Kamwe kambani iri kunze kweGarage, mari yakazara yekufungidzirwa inobhadharwa nemushanyi.
Pashure pekutsvaga paIndaneti, Unogona kutarisa chinzvimbo chako nebazi redu reChNUMXHrs.